Flow Rapid Dyeing Machine ကျော်မြင့်မားသောအပူချိန် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ဝေသူနှင့်စက်ရုံမှ Flow Rapid Dyeing Machine ကျော်မြင့်မားသောအပူချိန် အကြောင်းသင်သိရန်လိုအပ်သည်။
Flow Rapid Dyeing Machine ကျော်မြင့်မားသောအပူချိန်
ACME MACHINERY INDUSTRY CO., LTD. ဦးဆောင်သည် Taiwan ၏ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့ Flow Rapid Dyeing Machine ကျော်မြင့်မားသောအပူချိန်နိုင်ငံတကာအရည်အသွေးစံနှုန်းများကိုပံ့ပိုးမှုများပိုမိုလိုအပ်လျက်ရှိကြောင်းအတွက်တီထွင်သော။ ကျွန်တော်တို့ဟာအကောင်းဆုံး efficiency နဲ့ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များရှည်လျားနောက်ဆုံးရေရှည်တည်တံ့သောစွမ်းရည်နှင့်အတူဖောက်သည်များစိတ်ကျေနပ်စေကြောင့်လူသိများကြသည်။ တစ်ခုလုံးကိုဆွဲဆောင်မှုအကွာအဝေးယှဉ်ပြိုင်မှုဈေးကွက်ဈေးနှုန်းမှာငါတို့ထံမှ availed နိုင်ပါသည်။ သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများကိုသို့မဟုတ်အကြံပြုချက်များရှိပါကဆက်သွယ်ပါရန်တွန့်ဆုတ်မသွားပါ။
ထုတ်ကုန်များနှင့် client များအကြားနာမည်ကောင်းကိုခံစားပါ။ ထို့အပြင်စံထုတ်ကုန်မှတပါးကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏အထူးအမိန့်အဘို့အဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက်စိတ်ကြိုက်န်ဆောင်မှုတစ်ခုကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးပေးစွမ်းပါသည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်အစိတ်ဝင်စားဖောက်သည်တွေနဲ့စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှာကြံကြ၏။
ပုံစံ - AM-OHE
CREASE MARK အခမဲ့ဖြစ်သည်,အထည်ထိထိတွေ့မှုကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ
အထူးဆိုးဆေးပြွန်နှင့်ဆေးကြောစဉ်လည်ပတ်နေသည့်အ ၀ တ်အထည်များ၏ nozzle တည်ဆောက်မှုကကူညီသည်.ဤသည်ပိုကောင်းထည်ထိတွေ့ခံစားမှုရရှိ&တွန့အမှတ်အသားများဖယ်ရှားပစ်.
အပြည့်အဝလျှံ nozzle အထည်များ၏ pillingless သေချာ.
အခန်းတစ်ခုစီအတွက်သင့်တင့်လျောက်ပတ်သောဝန်စွမ်းရည်သည်အခန်းတစ်ခုစီတွင်ရှည်လျားသောထည်အရှည်ကိုကာကွယ်ပေးသည်,ထည်သံသရာအချိန် minimize.လေးလံသောစုပ်စက်သည်ဆိုးဆေးများကိုအလွန်မြင့်မားသော pump pump ဖြင့်ပို့ပေးသည်.ဒီအင်္ဂါကအထည်နှင့်အတူဆိုးဆေးအရက်၏မြင့်မားသောဖလှယ်သေချာ,အရှင်ယူနီဖောင်းဆိုးဆေးအောင်မြင်ခဲ့သည်.
နှစ် ဦး စလုံးလက်စွဲစာအုပ်&အော်တိုနို့တိုက်ကျွေးရေးစနစ်များကိုရရှိနိုင်ပါသည်,အလိုအလျောက်နှိုးဆော်,dilution&သတ်မှတ်ထားသောအချိန်အတွင်းဆိုးဆေးများသို့မဟုတ်ဓာတုပစ္စည်းများအားအစာကျွေးခြင်း,တဖြည်းဖြည်းသို့မဟုတ် degressively.ဤသည်အော်ပရေတာအမှားလျှော့ချရန်ကူညီသည်&ဆိုးဆေးတစ်ပုံစံတည်းတိုးတက်အောင်.
အပြည့်အဝလျှံ nozzle ဖြင့်တပ်ဆင်ထားခြင်းကြောင့်ဆေးကြောခြင်းမှကာကွယ်ခြင်းနှင့်တင်းမာမှုနည်းပါးခြင်းစသည်တို့သည် lycra အထည်များ၏အကောင်းဆုံး elasticity ကိုရရှိသည်။.
အခန်းတိုင်းရှိ Teflon စာရွက်သည်အထည်များကိုချောမွေ့စွာရွေ့လျားစေသည်&ဆေးပြားကိုရှောင်.
microprocessor နှင့် temperature controller နှစ်ခုလုံးတပ်ဆင်ထားသောစက်များကိုအပြည့်အဝအလိုအလျောက်သို့မဟုတ် Semiutomatic ဖြင့်လည်ပတ်နိုင်သည်.
အမွှာ-ဓာတုဗေဒတိုင်ကီသည်ဓာတုပစ္စည်းများနှင့်ဆိုးဆေးများကိုတစ် ဦး ချင်းစီ ပြင်ဆင်၍ အလိုအလျောက်အစာကျွေးရန်တပ်ဆင်ထားနိုင်သည်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.dyeing-machine.com/my/high-temperature-over-flow-rapid-dyeing-machine-1.html
သို့: ACME MACHINERY INDUSTRY CO., LTD.
ငွေပေးချေမှုရမည့်: ကျေးဇူးပြု. ရွေးပါ L / C ကို T / T နှင့် အခြား
110&ထုံးစံအတိုင်း;Flow Rapid ဆိုးဆေးစက်ကျော် အသွင်အပြင် MAX.အလုပ်လုပ်အပူချိန် 110&ထုံးစံအတိုင်း;ဂနိုင်လွန်အထည်ဆေးဆိုးခြင်းအတွက်ကောင်းသော,၎င်းသည်အလွန်ထိရောက်သောသုတ်ဆေးအရောင်ချွတ်သည့်ထိရောက်မှုနှင့်ချည်ပိတ်ထည်များပြုပြင်ခြင်းအချိန်ကိုသက်သာစေသည်. အလွန်နိမ့်ယိုယွင်းမှုဆိုးဆေးဆိုးဆေးအလွန်နိမ့်အရက်အချိုး 1:4~7,၎င်းသည်ဆိုးဆေးအသုံးပြုမှုကိုလျော့နည်းစေသည်,ဓာတုပစ္စည်း,စွမ်းအင်,ရေ&effluent ကုသမှု၏ကုန်ကျစရိတ်. CREASE MARK အခမဲ့ဖြစ်သည်,အထည်ထိထိတွေ့မှုကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပါအထူးဆိုးဆေးပြွန်နှင့် nozzle တည်ဆောက်မှုတို့သည်အထည်ထိတွေ့မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်&တွန့အမှတ်အသားများဖယ်ရှားပစ်.အပြည့်အဝလျှံ nozzle pilling သေချာ-ပိတ်ထည်နည်းသည်. ပိတ်ထည်ထဲကနေပျံ့နှံ့ဒါကြောင့်ပျော့ပျောင်းသောစီးဆင်းမှုဆိုးဆေးစနစ်ကထွက်ခွာသောအခါထည်ဆိုးဆေးပြွန်ထဲမှာဖြန့်သည်&မည်သည့် plaitdown ယန္တရားမရှိဘဲဆေးဆိုးခန်းထဲသို့ချောချောမွေ့မွေ့ drop.ယင်းကြောင့်စက္ကူလည်ပတ်နေစဉ်အတွင်းပုံမှန်မဟုတ်သော်လည်းပုံမှန်မဟုတ်သောစည်များကိုဆေးဆိုးသည့်အခန်းတွင်သိုလှောင်ထားသည်.ဤသည်ကိုလည်းတွန့်အမှတ်အသားများကနေတားဆီး. UNIFORM ဆိုးဆေးအခန်းတစ်ခုစီအတွက်သင့်တင့်လျောက်ပတ်သောဝန်စွမ်းရည်သည်အခန်းတစ်ခုစီတွင်ရှည်လျားသောထည်အရှည်ကိုကာကွယ်ပေးသည်,ထည်သံသရာအချိန် minimize.လေးလံသောစုပ်စက်သည်ဆိုးဆေးများကိုအလွန်မြင့်မားသော pump pump ဖြင့်ပို့ပေးသည်.ဒီအင်္ဂါကအထည်နှင့်အတူဆိုးဆေးအရက်၏မြင့်မားသောဖလှယ်သေချာ,အရှင်ယူနီဖောင်းဆိုးဆေးအောင်မြင်ခဲ့သည်. အလိုအလျောက်ဓာတုဆေးထိုးစနစ်နှစ် ဦး စလုံးလက်စွဲစာအုပ်&အော်တိုနို့တိုက်ကျွေးရေးစနစ်များကိုရရှိနိုင်ပါသည်,အလိုအလျောက်နှိုးဆော်,dilution&သတ်မှတ်ထားသောအချိန်အတွင်းဆိုးဆေးများသို့မဟုတ်ဓာတုပစ္စည်းများအားအစာကျွေးခြင်း,တဖြည်းဖြည်းသို့မဟုတ် degressively.ဤသည်အော်ပရေတာအမှားလျှော့ချရန်ကူညီသည်&ဆိုးဆေးတစ်ပုံစံတည်းတိုးတက်အောင်. စီးဆင်းမှုဆေးကြောစနစ်အထူးအထူးလျှံလန်းလန်းလန်းလန်းလန်းစနစ်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအဝတ်လျှော်မှုနှင့်ရေသုံးစွဲမှုကိုအနည်းဆုံးဖြစ်စေသည်,အဝတ်လျှော်အချိန်ကိုလည်းလျှော့ချ. အနိမ့်တင်းမာမှုနှင့် Pilling လျော့နည်းအဓိကပိတ်ထည်များနှင့်တင်းမာမှုနိမ့်စောင်ရေများ၏တားဆီးကာကွယ်တားဆီးဖို့အပြည့်အဝလျှံ nozzle နှင့်အတူတပ်ဆင်ထား lycra ပိတ်ထည်၏အကောင်းဆုံး elasticity ရရှိ. အခြားထူးခြားချက်များ အခြားအင်္ဂါရပ်များ နေရာလိုအပ်ချက်သိမ်းဆည်းပါ. စက်၏အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်သည်ပုတီးစေ့များကိုပေါက်ကွဲစေသည်,စက်၏အတွင်းပိုင်းမျက်နှာပြင်သည်ပိတ်ထည်များကိုပိတ်ဆို့ရန်ဆေးကြောထားသောမှန်တစ်ခုရှိသည်. အပိုထည့်သည့်တိုင်ကီ၏သွယ်ဝိုက်ရောစပ်ပေးခြင်းသည်အထိခိုက်မခံသောဆိုးဆေးပစ္စည်းများကိုခဲခြင်းမှရှောင်ရှားသည်. အခန်းတိုင်းရှိ Teflon စာရွက်သည်အထည်များကိုချောမွေ့စွာရွေ့လျားစေသည်&ဆေးပြားကိုရှောင်. microprocessor နှင့် temperature controller နှစ်ခုလုံးတပ်ဆင်ထားသောစက်များကိုအပြည့်အဝအလိုအလျောက်သို့မဟုတ် Semiutomatic ဖြင့်လည်ပတ်နိုင်သည်. အမှန်တကယ်ထည်လည်ပတ်မှုမြန်နှုန်းနှင့်လည်ပတ်နှုန်းတစ်ပြိုင်နက်ပြသရန်ချုပ်ရိုး detector.ချုပ်ရိုးကိုလည်းအလိုအလျှောက်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်. ရွေးချယ်စရာ ရွေးချယ်စရာကိရိယာများ စက်ကိုစတင်ရန်နှင့်အရက်စီးဆင်းမှုနှုန်းကိုချောချောမွေ့မွေ့ထိန်းချုပ်ရန်အင်ဗာတာ,ပါဝါစားသုံးမှုကိုလည်းကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏. ရေမီတာကိုတိကျစွာထိန်းချုပ်ရန်စီးဆင်းမီတာ. ရေပူပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက်ရေတိုင်ကီကိုအပူပေးပြီးစုစုပေါင်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်ချိန်ကိုသက်သာစေသည်. အမွှာ-ဓာတုဗေဒတိုင်ကီသည်ဓာတုပစ္စည်းများနှင့်ဆိုးဆေးများကိုတစ် ဦး ချင်းစီ ပြင်ဆင်၍ အလိုအလျောက်အစာကျွေးရန်တပ်ဆင်ထားနိုင်သည်. ယိုစီးမှုအချိန်သက်သာစေရန်စွမ်းအင်ယိုစီးမှု. တစ်ပြိုင်နက်တည်း Chem.စဉ်ဆက်မပြတ်နှင့်တည်ငြိမ်ကျွေးမွေးသေချာစေရန်နို့တိုက်ကျွေးရေးစနစ်. အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
အကောင်းဆုံး Flow Rapid Dyeing Machine ကျော်မြင့်မားသောအပူချိန် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက် Flow Rapid Dyeing Machine ကျော်မြင့်မားသောအပူချိန် ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ Flow Rapid Dyeing Machine ကျော်မြင့်မားသောအပူချိန် ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဝယ်ယူရန်အတွက်၊ Taiwan
မြင့်မားသောအပူချိန် Rapid ဆိုးဆေးစက်
မြင့်မားသောအပူချိန် Rapid ဆိုးဆေးစက် အင်္ဂါရပ်များ နိမ့်ရေသုံးစွဲမှု&အနိမ့်ညစ်ညမ်းမှုအစွန်းရောက်အနိမ့်အရက်အချိုး 1:4~5,ရေကို minimize လုပ်ပါ,ဓာတုနှင့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု,စွန့်ပစ်ရေသန့်သန့်ရှင်းရေးကိုလည်းကျဆင်းသွားသည်. UNIFORM ဆိုးဆေးရှည်လျားလွန်းသည့်အထည်များနှင့်ပိတ်ထည်များ၏ဆွဲအားကြောင့်အခန်းတစ်ခုစီတိုင်းအတွက်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောတင်စွမ်းနိုင်မှု.ဤသည်ပိုမိုမြင့်မားဆိုးဆေးတက်ယူနှင့် minimize လုပ်&ရှက်တယ်;ထည်သံသရာအချိန်.ထို့ကြောင့်ယူနီဖောင်းဆိုးဆေးလည်းအောင်မြင်ခဲ့သည်. အထည်များပျံ့နှံ့ဖြန့်ဖြူးဆေးသုတ်သည့်ပြွန်အတွင်းလည်ပတ်နေစဉ်ပိတ်ထည်များပြန့်ပွားစေရန်ကူညီသည့်စတုဂံမတူကွဲပြားဆိုးဆေးပြွန်နှင့်အတူ quipped ပြီးတော့ယန္တရား၏မည်သည့်အကူအညီမပါဘဲချောချောမွေ့မွေ့ချောင်ချောင်ချောင်ချိသို့ချစီးဆင်း.ဆေးသုတ်သည့်အခန်းတွင်သဘာဝအလျောက်ပြောင်းလဲမှုမရှိသော်လည်းစနစ်တကျသိုလှောင်ထားခြင်းကြောင့်၎င်းသည်တွန့်လိမ်ခြင်းပြfromနာကိုတားဆီးနိုင်သည်. SPANDEX အတွက်ပိုမိုနိမ့်ကျသောဖိအားနှင့်ပျော့ပျောင်းသောစီးဆင်းမှုအနိမ့်တင်းမာမှုနှင့်ပျော့ nozzle ဖိအား spandex အထည်များ၏ elasticity တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်. CRELE MARK နှင့် EDGE CURLING တို့၏လွတ်လပ်မှုသည်ခံစားချက်ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်မြင့်မားသောလိမ်အထည်များအတွက် detwisting အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ပိုကောင်းတဲ့ထိတွေ့ခံစားမှု၎င်း၏အထူး nozzle နှင့်ဆေးဆိုးပြွန်ဆောက်လုပ်ရေးအားဖြင့်တိုးတက်လာသည်.ဤသည်ကိုလည်းတွန့်အမှတ်အခမဲ့ရရှိ,အထူးသဖြင့် tricot ထည်၏အစွန်း curling ပြproblemနာကိုကာကွယ်ပေးသည်. အလိုအလျောက်ဓာတုဆေးထိုးစနစ်လက်စွဲစာအုပ်နှင့်အလိုအလျောက်ဓာတုဆေးထိုးသည့်စနစ်နှစ်ခုလုံးကိုရနိုင်သည်.အလိုအလျောက်နှိုးဆော်,အော်ပရေတာကိုအနည်းဆုံးဖြစ်စေသောဆေးများဖြင့်ဆေးဆိုးခြင်း (သို့) ဓာတုပစ္စည်းများရောစပ်ခြင်းနှင့်ကျွေးခြင်း’s ကိုအမှားအဖြစ်ဆိုးဆေးတစ်ပုံစံတည်းတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်. အလိုအလျှောက်သန့်ရှင်းရေးစနစ်အလိုအလျောက်သန့်ရှင်းသောစနစ်သည်ဆေးသုတ်ခြင်းအပြီးတွင်အကြံပေးအဖွဲ့ကိုလာမည့်အသုတ်၏ပိတ်ထည်များမှကာကွယ်ရန်တပ်ဆင်ထားသည်. အထူး Overflow သုတ်ခြင်းစနစ်အထူးလျှံလန်းလန်းလန်းလန်း့့့့့့့့့ရေ့့့့့့့ရေ့့့့့ရေ့့့့့ရေ့့့့့ရေ့့့့့့ရေ့့့ကိုအနည်းနဲ့အသေး. အာကာသလိုအပ်ချက်သိမ်းဆည်းပါကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဆောက်လုပ်ရေးသည်လိုအပ်သောနေရာကိုချွေတာသည်. ရွေးချယ်စရာ ရွေးချယ်စရာအထူးကိရိယာများ အမှန်တကယ်ထည်လည်ပတ်မှုမြန်နှုန်းနှင့်လည်ပတ်မှုနှုန်းတစ်ခု၏လည်ပတ်ချိန်ကိုပြသနိုင်သည့်အပြင်ချုပ်ရိုးကိုအလိုအလျောက်ရှာဖွေပေးသည်. တိကျစွာရေအဆင့်ကိုထိန်းချုပ်ရန်စီးဆင်းမီတာ. ဒုတိယဓာတုပစ္စည်းတိုင်ကီသည်ဆိုးဆေးနှင့်ဓာတုပစ္စည်းများကိုသီးခြားစီပြင်ဆင်ရန်. ဆိုးဆေးအချိန်ဆိုးဆေးသက်သာစေရန်ရေကို preheating များအတွက် tank preheating. ယိုစီးမှုမြန်စေရန်စွမ်းအင်ယိုစီးမှုစနစ်. အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
Flow Rapid Dyeing Machine ကျော်မြင့်မားသောအပူချိန် အင်္ဂါရပ်များ စီးဆင်းမှုဆေးဆိုးခြင်းစနစ်အထူးအပြည့်အဝကျော်စီးဆင်းမှု nozzle system နှင့်တပ်ဆင်ထားသောမြင့်မားသောစီးဆင်းမှုနှုန်းလည်ပတ်မှုစုပ်စက်နှင့်အတူဆိုးဆေးယမကာနှင့်အထည်နှင့်မြင့်မားသောအပြန်အလှန်တိုးတက်စေခြင်းနှင့်ယူနီဖောင်းဆိုးဆေးရရှိသော. အလွန်အမင်းနိမ့်အရက်အချိုးအစားအစွန်းရောက်အနိမ့်အရက်အချိုး 1:4~5 ရေကို minimize,ဓာတုနှင့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု,အလဟ water ဖြစ်သွားသောရေသန့်စင်မှုသည်အလွန်ကျဆင်းသွားသည်. ဆေးလုံးအခမဲ့,နိမ့်တင်းမာမှု,မြင့်မားသော elasticityပျော့ပျောင်းသောချောမွေ့သောဆိုးဆေးယိုစီးမှုသည်ဂျက်စီးဆင်းမှုဆိုးဆေးစက်တွင်များသောအားဖြင့်ဖြစ်ပွားသောဆေးကြောခြင်းပြfromနာကိုကာကွယ်ပေးသည်.နိမ့်တင်းမာမှု spandex ထည်၏ elastic ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုရှောင်ရှား. CREASE MARK UNIFORM ဆေးဆိုးခြင်းများအခမဲ့ဖြစ်သည်ရှည်လျားသောသံသရာအချိန်နှင့်ပိတ်ထည်များ၏ဆွဲအားကြောင့်တွန့်တိုခြင်းကိုကာကွယ်ရန်အခန်းတစ်ခုစီအတွက်တွန့်အမှတ်အသားစွမ်းရည်ကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာတင်ခြင်း.ဤသည်ပိုမိုမြင့်မားဆိုးဆေးတက်ယူနှင့် minimize လုပ်&ရှက်တယ်;ထည်သံသရာအချိန်.ထို့ကြောင့်ယူနီဖောင်းဆိုးဆေးလည်းအောင်မြင်ခဲ့သည်. ပိတ်ထည်ထဲကနေပျံ့နှံ့စတုဂံမတူကွဲပြားဆိုးဆေးပြွန်တပ်ဆင်ထားသည့်အထည်များသည်ဆိုးဆေးပြွန်အတွင်းလည်ပတ်နေစဉ်ချည်ထည်များပြန့်ပွားစေရန်ကူညီပေးသည်၊.ဆေးသုတ်သည့်အခန်းတွင်သဘာဝအလျောက်ပြောင်းလဲမှုမရှိသော်လည်းစနစ်တကျသိုလှောင်ထားခြင်းကြောင့်၎င်းသည်တွန့်လိမ်ခြင်းပြfromနာကိုတားဆီးနိုင်သည်. အာကာသလိုအပ်ချက်သိမ်းဆည်းပါကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဆောက်လုပ်ရေးသည်လိုအပ်သောနေရာကိုချွေတာသည်. အလိုအလျှောက်သန့်ရှင်းရေးစနစ်ဆေးကြောခြင်းသံသရာတစ်ခုစီတိုင်းကိုအလိုအလျှောက်သန့်ရှင်းရေးစနစ်တပ်ဆင်ထားသည်. အထူး Overflow သုတ်ခြင်းစနစ်အထူးလျှံလန်းလန်းလန်းလန်း့့့့့့့့့ရေ့့့့့့့ရေ့့့့့ရေ့့့့့ရေ့့့့့ရေ့့့့့့ရေ့့့ကိုအနည်းနဲ့အသေး. အလိုအလျောက်ဓာတုပစ္စည်းစနစ်လက်စွဲစာအုပ်နှင့်အလိုအလျောက်အစာကျွေးခြင်းစနစ်နှစ်ခုလုံးကိုရနိုင်သည်.အလိုအလျောက်နှိုးဆော်,ဆေးဆိုးခြင်း (သို့) ဓာတုပစ္စည်းများရောခြင်းနှင့်ဆေးထိုးခြင်းသည်အော်ပရေတာအမှားများကိုလျော့နည်းစေခြင်းအပြင်ဆေးဆိုးခြင်း၏တူညီမှုကိုတိုးတက်စေသည်. ရွေးချယ်စရာ ရွေးချယ်စရာအထူးကိရိယာများ အမှန်တကယ်ထည်လည်ပတ်မှုမြန်နှုန်းနှင့်လည်ပတ်မှုနှုန်းတစ်ခု၏လည်ပတ်ချိန်ကိုပြသနိုင်သည့်အပြင်ချုပ်ရိုးကိုအလိုအလျောက်ရှာဖွေပေးသည်. တိကျစွာရေအဆင့်ကိုထိန်းချုပ်ရန်စီးဆင်းမီတာ. ဒုတိယဓာတုပစ္စည်းတိုင်ကီသည်ဆိုးဆေးနှင့်ဓာတုပစ္စည်းများကိုသီးခြားစီပြင်ဆင်ရန်. ဆိုးဆေးအချိန်ဆိုးဆေးသက်သာစေရန်ရေကို preheating များအတွက် tank preheating. ယိုစီးမှုမြန်စေရန်စွမ်းအင်ယိုစီးမှုစနစ်. အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ
မြင့်မားသောအပူချိန် Rapid ဆိုးဆေးစက် အင်္ဂါရပ်များ အလွန်အမင်းနိမ့်အရက်အချိုးအစားအစွန်းရောက်အနိမ့်အရက်အချိုး 1:4~ရေကို minimize လုပ်ဖို့ 5,ဓာတုနှင့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု,ထို့အပြင်အလဟ water ဖြစ်သွားသည့်ရေသန့်စင်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်. ချကိရိယာဆေးဆိုးပြွန်ရဲ့အဆုံးမှာရှိတဲ့ကိရိယာတန်ဆာပလာများတပ်ဆင်ထားသည်,ဆိုးဆေးနှင့်ဆိုးဆေးစွမ်းရည်တိုးတက်စေရန်ရှောင်ရှားရန်အခန်းများသို့စနစ်တကျကျဆင်းသွားစေရန်သေချာစေရန်. အလိုအလျောက်ဓာတုပစ္စည်းစနစ်လက်စွဲစာအုပ်နှင့်အလိုအလျောက်အစာကျွေးခြင်းစနစ်နှစ်ခုလုံးကိုရနိုင်သည်.အလိုအလျောက်နှိုးဆော်,ဆေးဆိုးခြင်း (သို့) ဓာတုပစ္စည်းများရောခြင်းနှင့်ဆေးထိုးခြင်းသည်အော်ပရေတာအမှားများကိုလျော့နည်းစေခြင်းအပြင်ဆေးဆိုးခြင်း၏တူညီမှုကိုတိုးတက်စေသည်. အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ
ကျော် Flow ပုံမှန်ဖိအား Rapid ဆိုးဆေးစက် အင်္ဂါရပ်များ ဆန်းသစ်သောဖွဲ့စည်းပုံလွယ်ကူသောလည်ပတ်မှုနှင့်ကျယ်ပြန့်သောသက်ဆိုင်မှုdual စီးဆင်းမှုစနစ်၏တီထွင်ဆန်းသစ်သောဒီဇိုင်းသည်နိုင်ငံများစွာတွင်မူပိုင်ခွင့်တင်ထားပြီး overflow dyeing နှင့် jetflow dyeing များအတွက်သက်ဆိုင်ပါသည်။.ဒါဟာအပြည့်အဝလျှံဆိုးဆေးနှင့်အတူလျှောက်ထားရန်ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်,အပြည့်အဝ jetflow ဆေးဆိုးသို့မဟုတ်တစ်ပိုင်း-ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးနှင့်အညီ jetflow ဆေးဆိုး,ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အလေးချိန်(700 ကျော် gm/yd)ထိုကဲ့သို့သောဝါဂွမ်းအဖြစ်ယက်သို့မဟုတ်ဇာထိုးထည်၏,ကော့တေး,သိုးမွှေး,polyester,နိုင်လွန်နှင့်ပေါင်းစပ်စသည်တို့ဖြစ်သည်.မူပိုင်ခွင့်ဆေးဆိုးစနစ်အားဖွငျ့ဖွစျသညျ,ဆေးပြားနဲ့တူအားလုံးချို့ယွင်းချက်,ဖွဲ့စည်းပုံပုံပျက်သောနှင့်တွန့အမှတ်အသားများလုံးဝတားဆီးနိုင်ပါတယ်.အပြင်,အလွန်ကောင်းမွန်သောကျုံ့ထိန်းချုပ်မှုကိုတင်းမာမှုမှတစ်ဆင့်ရရှိနိုင်သည်-ဇာထိုးအထည်များအတွက်လျတ်ဆေးဆိုး၏လျော့နည်း.နိမ့်ကျခြင်းနှင့်ကြီးမားသောဝင်ရောက်ခွင့်တံခါးကိုလူ့အင်ဂျင်နီယာများအရဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်.ပလက်ဖောင်းမလိုအပ်ပါဘူး,လွယ်ကူပြီးလုံခြုံစိတ်ချရသောလုပ်ဆောင်မှုကိုပြုလုပ်သည်.၎င်း၏အလေးချိန်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့တင်းမာမှုအင်အားကိုလည်းလျော့နည်းစေသည်.အပြည့်အဝအလိုအလျောက်သို့မဟုတ်တဝက်-အော်တိုထိန်းချုပ်မှုစနစ် optioned နိုင်ပါသည်. အလိုအလျောက်ဓာတုပစ္စည်းစနစ်လက်စွဲစာအုပ်နှင့်အလိုအလျောက်အစာကျွေးခြင်းစနစ်နှစ်ခုလုံးကိုရနိုင်သည်.အလိုအလျောက်နှိုးဆော်,ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကာလအတွင်းဆေးဆိုးခြင်း (သို့) ဓာတုပစ္စည်းများအားဆေးကြောခြင်းနှင့်အစာကျွေးခြင်းသည်အော်ပရေတာအမှားကိုလျော့နည်းစေပြီးဆေးဆိုးခြင်း၏တူညီမှုကိုတိုးတက်စေသည်။. လှိုင်းတံပိုးဆိုးဆေးစီးဆင်းမှုကောင်းမွန်သောဆိုးဆေးအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးနောက်ဆုံးလှိုင်းဆေးဆိုးသည့်အရက်စီးဆင်းမှုသည်ထည်၏ဆန့်အားကိုလျော့ကျစေသည်,အလွန်ဆိုးရွားဆိုးဆေးအကျိုးသက်ရောက်မှုရရှိရန်အတွက်အထည်နှင့်ဆေးရည်အကြားအကြားပိုမိုမကြာခဏဆက်သွယ်မှုနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောထိုးဖောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်. ရှုပ်ထွေးသော detectအဆိုပါမောင်းနှင် reel v အားဖြင့်မောင်းနှင်သည်.အထည် ၂၂၀yd အထိမြန်စွာဖြင့်ပို့ဆောင်ရန်မော်တာ/၅ မိနစ်(လျှံ)သို့မဟုတ် 350yd/၅ မိနစ်(ဂျက်).အဖုံးတစ်ဝိုက်တွင်ပိတ်ထည်များကိုပိတ်ဆို့ထားခြင်းမှကာကွယ်ရန်လုံခြုံရေးကိရိယာတစ်ခုတပ်ဆင်ထားသည်. အထူးအတွက် ဝါဂွမ်းထည် သိုးမွှေး နူးညံ့သိမ်မွေ့သောအဝတ်အထည်များ,ကဲ့သို့:SPANDEX(LYCRA),Terry,VELOR,TOWEL&မင်္ဂလာပါ;&မင်္ဂလာပါ;ETC. optional ကို ရွေးချယ်မှုအထူးအထူးကိရိယာများ အမှန်တကယ်ထည်ပြေးမြန်နှုန်းကိုပြသနိုင်ဖို့ချုပ်ရိုး detector.နှင့်တော်လှန်ရေးနှုန်းသံသရာအချိန်အဖြစ်အလိုအလျောက်ချုပ်ရိုးကိုရှာဖွေတာ. တိကျစွာရေအဆင့်ကိုထိန်းချုပ်ရန်စီးဆင်းမီတာ. linearly အားဖြင့်ဓာတုကျွေးမွေးဖို့ Programmable ဆေးထိုးစနစ်,တိုးလာသို့မဟုတ် decrely. အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ